Sida Loola Safro Cudurka Cusub ee COVID Omicron?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Sida Loola Safro Cudurka Cusub ee COVID Omicron?
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka Dr. Peter Tarlow, oo sidoo kale ah wadaadka Saldhigga Koleejka, Waaxda Bilayska Texas, ahna khabiir ku takhasusay socdaalka & amniga iyo dalxiiska, ayaa talo u leh adduunka dalxiiska: Tani maaha waqti argagax leh, laakiin Tani waa waqtigii aad isticmaali lahayd maskaxdaada.
Taladani waxay timid laba maalmood ka dib markii adduunka uu ka kacay nooc kale oo Coronavirus ah, oo loo yaqaan Omicron, ama farsamo ahaan nooca B.1.1.529.
The Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ka codsaday hoggaamiyeyaasha adduunka inaysan ku lug yeelan falcelinta jilibka waxayna ka digtay soo rogida xayiraadaha safarka markii warka Omicron soo baxay.
Tani waxay si gaar ah u dhaawacaysaa Warshadaha Dalxiiska Adduunka xilli iftiin soo kabasho oo ifaya uu iftiimayay. Suuqa Socdaalka Adduunka ee London ama IMEX ee Las Vegas ayaa hadda si guul leh u soo dhammaaday. Dareen yididiilo leh ayaa kiciyay duulimaadyo caalami ah oo cusub, huteel la furay, iyo xayaysiisyada dalxiiska ee aduunka.
Rajadaan ayaa burburtay saacado gudahood labo maalmood ka hor markii wadamada Yurub ay isla markiiba bilaabeen inay xiraan socdaalkii ay ku tagi jireen Koonfurta Afrika. Taas waxa ku xigtay xayiraad dhanka socdaalka ah oo uu Maraykanku amray madaxweyne Biden.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray Wasaaradda xiriirka caalamiga iyo iskaashiga ee Koonfur Afrika, nooca cusub ayaa markii ugu horreysay laga helay Botswana, labaadna Koonfur Afrika.
Waxay mar hore u safartay Jarmalka, Netherlands, Hong Kong, oo ay keeneen rakaab saarnaa duulimaadyo caalami ah. Fayraskan maalin gudaheed ma ahan arrin Koonfur Afrikaan ah oo go'doonsan.
In kasta oo waddamo ay ku jiraan Boqortooyada Ingiriiska ay saacado gudahood kaga falceliyeen xidhitaanka xuduudaha, baajiyeen duullimaadyadii u dhexeeyay Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska iyo Koonfur Afrika, ma joojin karto fayraskan inuu si caalami ah uga gudbo. Waxay hore u ahayd Yurub iyo Hong Kong ka hor inta aan adduunka intiisa kale xitaa ogeyn.
Gobolka New York, dalka Koonfurta Ameerika ee Kolombiya ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo caafimaad oo ku salaysan nooca fayraskan cusub, in kasta oo ay weli qabaan kiisas eber ah.
Isbeddelkan lagu xakameynayo duullimaadyada Koonfurta Afrika ayaa hadda go'doominaya Koonfurta Afrika, iyadoo la xirayo safarradeeda iyo warshadaheeda dalxiiska. Maanta oo kaliya Qatar iyo xitaa Seychelles ayaa ku dhawaaqay xiritaanka xuduudaha iyo isku xirka hawada.
Sacuudi Carabiya, si kastaba ha ahaatee, waxay hadda shaaca ka qaaday inay u ogolaan doonto dadka safarka ah ee ka imaanaya dhammaan wadamada, ilaa iyo inta ay heleen hal dose oo ah tallaalka COVID-19. Si kastaba ha ahaatee, Boqortooyada ayaa hakisay duulimaadyadii South Africa, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, iyo Eswatini.
Holland iyo dhowr waddan oo kale ayaa xannibaya.
… laakiin sidee?
Anita Mendiratta, oo ah la taliyaha xoghayaha guud ee UNWTO Zurab Pololikashvili ayaa shalay Twitter-ka u soo qortay madaxeeda, taasoo uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka isagoo leh:
Waayo-aragnimadu waxay muujisay in khatarta ku salaysan, habka sayniska uu yahay dariiqa loo maro: Si loo ilaaliyo dadka badbaadada iyada oo aan la jarin nolosha dalxiiska.
Xayiraadaha socdaalku waxay dhaleeceeyaan dalalka iyo gobollada oo dhan, waxay khatar geliyaan shaqooyinka, waxayna dhaawacaan kalsoonida. Iyagu waa xalka ugu dambeeya, maaha jawaabaha koowaad.
Sida iska cad, qof kasta oo jecel inuu safro, ama bixiyo adeegyada safarka waa inuu ku raacaa hadalka Zurab ka hor maalmo uun ka hor shirweynaha guud ee UNWTO ee aan wali la baajin ee Madrid, laakiin ereyadan oo kale ma haystaan ​​xal gacan-ku-taag ah.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxa ay doonaysaa in ay bixiso hab cusub, oo ku salaysan cilmi-baadhis cilmiyaysan, iyo hadafka ah in socdaalka iyo dalxiisku sii shaqeeyo.
Talada WTN waxa ay dheer tahay dadaalka ururka ee ku aaddan sinnaanta helitaanka tallaalka ee dhammaan waddamada iyo u baahan tallaal si loo safro.
Ma noqon karto in uu jiro tallaal ku filan Mareykanka iyo Yurub, iyadoo boqolkiiba 30 ama in ka badan ay diidaan, halka celcelis ahaan 7% laga tallaalay meelo badan oo Afrika ah, dadkuna ay quus ka taagan yihiin inay helaan noloshan. -badbaadinta tallaalka.
Dr. Peter Tarlow, madaxweynaha WTN
Heerarka tallaalka oo hooseeya sababtoo ah helitaanka tallaalka ayaa sidoo kale run ka ah waddamo dhowr mayl u jira xudduudaha Mareykanka, oo ay ku jiraan dalal badan oo Kariibiyaanka ah.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka waxay ku boorinaysaa UNWTO, WHO, WTTC, IATA, dawladaha, iyo warshadaha safarka inay u riixaan qaab wax yar ka duwan sidii looga gudbi lahaa dhibaatada. WTN waxay dareensan tahay in habkani aanu burburin doonin safarka muhiimka ah iyo warshadaha dalxiiska, oo u oggolaanayo hab yididiilo leh oo warshadan ay ku shaqeyso oo ay ku barwaaqowdo COVID-19.
Habkan oo kale ayaa u shaqaynayey waddamo ay ku jirto Israa'iil.
Kahor duulimaad kasta oo caalami ah wuxuu u baahan yahay baaritaan degdeg ah PCR garoonka diyaaradaha ama 24 saacadood gudahood ka hor inta aan la dhoofin, xitaa kuwa si buuxda loo tallaalay.
Hubi in qof kasta oo raacaya duulimaad caalami ah uu si buuxda u tallaalay.
Hargabku waa nooc ka mid ah Coronavirus oo inta badan laguma kala saari karo COVID-19, ka dhig qasab rakaabka inay qaataan tallaalka hargabka, gaar ahaan xilliga hargabka.
Tijaabada PCR ee degdega ah waa hab cusub oo lagu baadho Covid-19 oo ay dhawaan ansixisay FDA. Tijaabada PCR ee degdega ah waa nooc cusub oo xiiso leh oo ah baaritaanka Covid sababtoo ah waxay isku daraan saxnaanta baaritaanka PCR iyo waqtiga degdega ah ee baaritaanka degdega ah. Tijaabooyinkan Covid waxay caadi ahaan qaataan ilaa 15 daqiiqo si ay u bixiyaan natiijooyin.
Tijaabooyinka degdega ah ee PCR waa ikhtiyaar ku habboon qof kasta oo si degdeg ah ugu baahan natiijooyin sax ah, sida qof u baahan natiijooyinka safarka 15 daqiiqo gudahooda marka uu baxo, ama marka uu la kulmo calaamadaha Covid-19.
Tijaabooyin PCR degdeg ah waa ogaanshaha suufka sanka. Waxay ka shaqeeyaan inay ogaadaan walxaha hidde-sidaha gaarka ah ee uu leeyahay fayrasku. Tijaabada PCR waxay raadisaa walxaha gudaha fayraska ku jira ee heer molecular, halkii ay ka raadin lahaayeen borotiinada laga helo fayraska dushiisa, sida ay sameeyaan baadhitaanada antigen-ka.
Tijaabada PCR ee degdega ah waa inay noqotaa mid caadi ah 24 saacadood gudahooda ee safarka caalamiga ah, oo laga heli karo garoomada diyaaradaha marka la hubinayo duulimaad caalami ah, marka loo eego thwaa Shabakadda Dalxiiska Adduunka cusub talo bixin.
Habkan oo kale ereyada Xoghayaha Guud ee UNWTO ee ah in la isticmaalo xaddidaadda safarka sidii mawqifkii ugu dambeeyay waxay noqdaan kuwo dhab ah.
La'aanteed, waddan kastaa wuxuu jiidi doonaa biriiga degdegga ah si uu u ilaaliyo muwaadiniintiisa. Inta badan, tani aad bay u daahdaa, xitaa marka la sameeyo maalin ama laba maalmood gudahood, ama marka la sugo si loo fahmo culays cusub.
Madaxweynaha WTN Dr. Peter Tarlow wuxuu yiri:
“Waxaan u baahanahay inaan wax ka barano xaaladan. Ma jirto waqti argagax leh, waxaan u baahanahay inaan isticmaalno maskaxdeena, oo aan keeno warshadan, caafimaadka iyo dawladaha isku mid ah."
Habkani wuxuu qaadanayaa dadaal aad u weyn dhammaan qaybaha. Wadamo uu Sacuudigu ka mid yahay, ayaa hormuud ka ahaa Dalxiiska Word, waxayna lacagta ka dambeeyaan fikrado wanaagsan.
Hadda waa waqtigii la maalgelin lahaa hirgelinta nidaamka, ka dhigista mid la heli karo meel kasta oo adduunka ah.
Tani waa lagama maarmaan, marka dhammaanteen waa la ilaaliyaa, iyo in la hubiyo safarka iyo dalxiisku waa barwaaqoobi karaan xitaa marka ay soo baxaan khataro caafimaad oo cusub oo la xiriira COVID.